Ndezvipi zvakanaka zvekubata zvese-mu-one? - Nhau - Shenzhen VisionVision Technology Co LTD
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Ndezvipi zvakanaka zvekubata zvese-mu-one?
Iyo yekubata zvese-mu-imwechete muchina unobatanidza kubata uye kutonga. Kubata ese-mu-mumwe muchina unovandudza zvakanyanya kushanda kwevanhu basa. Sekuisa mudziyo, iyo-in-one inobata skrini ine zvakawanda zvakanaka sekusimbisa uye kugadzikana, kupindura nekukurumidza, kuchengetedza nzvimbo, uye kutaurirana kuri nyore. Vashandisi vanogona kurumidza kuwana ruzivo rwavanoda nekubata zvinyoronyoro muchina wechidzitiro nawo minwe yavo, zvichiita kusangana kwevanhu-komputa kuve nyore. Seyakakwira-tech muchina, iyo-in-imwe yekubata muchina yakadzora zvishoma nezvishoma chinzvimbo cheiyo yakachena yekubata skrini, ichibvumira vashandisi kuti vanzwe zvechokwadi hunhu hwemahara kudyidzana pakati pevanhu nemuchina, uye kuve nehukama hwakanaka mhedzisiro.
Bata zvese-mu-izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri ane hukama, kunyanya mune indasitiri yezvemari yebhizinesi remubvunzo uye inoenderana neruzivo kuratidza, telecom, nhare uye Unicom bhizinesi horo mubvunzo mubhizinesi kana chigadzirwa kusimudzira, zvitoro zvinotengesa uye hombe dzekutengesa kusimudzira chigadzirwa kusimudzira uye zvimwe zvigadzirwa Zvemashandisirwo akadai semubvunzo, mabhaisikopo makuru anoshandiswa kuratidza vhidhiyo uye kukoshesa bhaisikopo, kuzvirongera-wega uye kushambadza muindasitiri yekudyira, uye mafomu ekudzidzisa anogona kushandiswa mukudzidzisa multimedia kana kusanganiswa nemabhodhi machena kuti uwane multimedia kudzidzisa. Pamusoro peaya maindasitiri ari pamusoro, kune akawanda mafomu anogona kushandiswa. Mune yechinyakare kushambadzira muchina indasitiri, iyo-ye-imwe inobata mushini inogona kuratidza zvirimo zvekusimudzira zvakanyanya zvakajeka uye kutamba yakanaka mhedzisiro mukudyidzana. Huwandu hwekutengesa hweyese-in-imwe yekubata muchina, kunyanya yakatwasuka, yanga iri kubva muchikamu chechipiri cha2013 kusvika parizvino Mukota yekutanga yegore ra2014, kwave nekukwakuka kwemhando yepamusoro. Saka nei vatengi vachiwedzera vachifarira kubata zvese-mu-izvo? Ndezvipi zvakanakira?
Ngatitangei neyakajairika pfungwa yekubata mumwe muchina. Iyo yekubata ese-mu-mumwe muchina unobatanidza epamberi yekubata skrini, maindasitiri kutonga, komputa uye mamwe matekinoroji, ayo anogona kuona yeruzhinji ruzivo mubvunzo, uye yakashongedzerwa nezvigunwe zvigunwe, ma scanner, makadhi kuverenga, makaprinta madiki uye zvimwe zvinongedzo, izvo zvinogona kuona zvigunwe. kupinda, kutsvaira makadhi, kudhinda, nezvimwe. Zvakananga zvinodiwa. Kuwedzera software inoenderana kunogona kuona mamwe mabasa ekubatsira. Iyo yekubata skrini ine ina kana shanu waya resistive skrini, pamusoro acoustic wave skrini, infrared skrini, holographic nano touch mafirimu uye mamwe akanakisa ekubata skrini kumba uye kunze kwenyika, ayo anogona kusangana nezvinodiwa zvekushandisa zvevashandisi munzvimbo dzakasiyana nenzvimbo. Nekudaro, nekuda kwekudhura kwepamusoro kwema infrared touch screens, infrared touch screens parizvino ndiyo inowanzoitika. Iyo inobata ese-mu-one muchina chigadzirwa chekubata chinosunga iyo yekubata skrini uye inoenderana software pamwechete uye inoishongedza neyekunze pasuru yekutarisa mashandisiro ayo.
Iyo capacitive inobata skrini haidi kushandiswa kwegonzo kana keyboard. Zvese mashandiro ekomputa anogona kugoneswa nekureruka kubaya kana kutsvaira pamadziro, zvichiita kuti komputa ive nyore kushandisa. Chikuru hunyanzvi hwekubata makomputa ndeyekuti inoshandisa tekinoroji yekubata, iyo inoshandura zvachose nzira vanhu vanobatana nayo nemakomputa.
Yapfuura:Ongorora dambudziko rekuparadza kupisa kweese-mu-one makomputa
Tevere:Ndezvipi zvakanakira uye kukosha kwegore desktop desktop system?